Filoha mivady teny La Réunion kely : Tsy nanadino ireo niangaran’ny vintana -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha mivady teny La Réunion kely : Tsy nanadino ireo niangaran’ny vintana
30/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nanadino ireo mponina mipetraka eny amin’ny faritra La Réunion Kely ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ny vadiny Ramatoa Rajaonarimampianina Voahangy, indrindra amin’izao fiafaran’ny taona izao. Nahatsiaro manokana azy ireo izy mivady, ka nidina teny an-toerana omaly, nanolotra fanampiana entin’ireo mponina miatrika ny fety, izay notronin’ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. “Mahatsiaro isika, mahatsiaro izahay fa misy ihany izay hiangaran’ny vintana mipetraka amin’itony toerana itony ka izay no hahatongavanay manolotra vatsikely hoentina amin’izao faran’ny taona izao, hamalifaliana ny tokantrano. Tokantrano aman-jatony maro no omena izany eto amin’ny faritra La Réunion Kely. Aoka hitandrina amin’ny tsaho isika hoe, ho avy ny Filoham-pirenena hanala anareo amin’ity toerana ity fa tsy izany no hahatongavan’ny Filoha androany (omaly) fa hitondra masoandro ho anareo”, hoy ny Filoham-pirenena nitafa tamin’ireo vahoakan’ny La Réunion Kely. Nisy noho izany, ny fanolorana sakafo toy ny vary, menaka, siramamy, ronono, savony, biscuit sy vatomamy ho an’ny olona arivo eny an-toerana. Ary ny tena lehibe indrindra ny fanolorana trano lay mirefy 12 metatra torandroa, izay antonona olona miisa 10, ka tokantrano 198 izay ahitana olona 850 no hisitraka izany. Marihina fa, ankizy ny 125 isa amin’ireo, ary be antitra kosa ny 22. Miisa 15 ny vehivavy bevohoka, 46 vehivavy mampinono ary olona manana fahasembanana ny efatra. Nampanantena ireo mponina koa ny Filoha Rajaonarimampianina fa hanamboatra iny faritra iny mba hanatsarana ny renivohitra. “Isika rehetra hiara-hientana sy hiaraka hiezaka amin’ny hanamboarana ity toerana ity, ary izahay dia hitondra fanamboarana araka izay azo atao. Mila vahaolana maharitra isika ary efa mitady an’izany izahay. Tsy sanatria tsy hitanay akory ianareo fa hiaraka isika, hifandinika sy hitondra vahaolana amin’ny toe-javatra tahak’izao hanatsarana ny renivohitry ny firenena ary hitondrantsika fampandrosoana ho an’I Madagasikara”, hoy hatrany ny Filoha.
Miantso fahatsiarovantenan’ny tsirairay
Mahakasika ny fiovaovan’ny toetr’andro kosa indray, nanafatra ny olona mba ho mailo hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina Hery, ka samy ho tompon’andraikitra avy, indrindra ireo faritra manamorona ny rano. “Aoka hitandrina amin’ny fiovan’ny toetr’andro amin’ny habetsaka ny orana isika satria tsy maintsy mailo ary tsy maintsy miomana amin’izany isika. Milaza amin’ireo tompon’andraikitra rehetra na an-drenivohitra na amin’ny faritra rehetra, indrindra amin’ireo faritra manamorona ny rano mba hitandrina ary handray ny fepetra rehetra mifanitsy amin’izany hiarovana ny vahoaka”, hoy hatrany ny hafatry ny Filoha. Nomarihany ihany koa, fa mila tandrovana ny fahadiovana satria ny fahadiovana dia miainga avy amin’ny tsirairay. Eo koa ireo tompon’andraikitra maro samihafa, na avy amin’ny fokontany, kaominina dia manana andraikitra ary tsy afa-miala amin’izany. Noho izany, tokony samy handray andraikitra ny rehetra manoloana ny resaka fahadiovana, ka tsy tokony atao fanariampako ny lakan-dranon’Andriantany, hoy hatrany izy nanohy ny teniny. Miantso ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay manoloana ireo andraikitra ireo aho, hoy izy namarana ny teniny. Nankasitraka izao fanampiana nentin’ny Filoham-pirenena mivady izao ireo mponina teny amin’iny faritra iny. Tsy mbola nisy Filoha nahavita an’izao , hoy ny solontenan’ny mponina eny. Tsapanay tokoa fa tsy misy ambadika politika izao fa fitsinjovana ny madinika. Izahay ety mantsy dia tsy ao anaty lisitry ny mpifidy. Manana ray aman-dreny tokoa izahay manana an’io filoha Hery Rajaonarimampianina io.
Ao anatin’izao fiatrehana ny fotoa-pahavaratra izao, betsaka ny fandaminana hijerena ny lakan-drano hiarahan’ny faritra Analamanga amin’ny ministeram-panjakana miadidy ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, fanajariana ny tany ary fampitaovana sy ny Apipa ary ny BNGRC. Voalaza fa misy ny ankamehana hanenana ny fiantraikan’ny loza manoloana ireo rivo-doza 2 na 3 izay vinavinaina handalo an’I Madagasikara io, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny faritra Analamanga Rakotonanahary Tiarainiaina Ndratonomena. Fa ny tena zava-dehibe, dia ny fanavaozana ny renivohitr’I Madagasikara ka mba ho fijery vaovao no ahitana an’Antananarivo afaka 10 na 20 taona. “Ankoatra ny fanavaozana ny drafitra nasionaly ho an’ny fampandrosoana, hisy ihany koa ny fanaovana ny drafitra rezionaly ho an’ny fampandrosoana ka hivoaka amin’ny 2018 izao ny an’I Analamanga. Efa manana teknisianina mijery tsara izay zavatra izay isika raha mikasika ny an-tanan-dehibe no jerena”, hoy hatrany ny fanazavana.
Araka ny voalazan’ny andininy faha-102 andalana faharoa amin’ny Lalàm-panorenana dia misy ny fanaraha-maso ataon’ny Loholon’i Madagasikara ny Governemanta ka atao indray mandeha isaka ny tapa-bolana ny fametraham-panontaniana farafahakeliny. Tamin’ny fivoahana ara-potoana voalohany moa dia tsy ...Tohiny